असोज ३ देखि ९ गते सम्म तपाईको साप्ताहिक राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस – Rapti Khabar
2021, April 17, Saturday
असोज ३ देखि ९ गते सम्म तपाईको साप्ताहिक राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस
ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । वित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । मंगल कार्यको योगछ र सन्तान सुखपनि मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा बाटो काट्दा वा यात्रा गर्दा सचेत हुनुपर्छ । यो साताका लागि शुभअङ्क ५,९ र शुभरङ्ग ध्वाँसे वा पहेँलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व हनुमानजीको स्मरण गरी कार्य गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । रोकिए काम दोहोर्याएर गर्दा फाइदा हुन सक्नेछ । कला,साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । लगनशीलताले कामहरु अगाडी बढ्नेछन । दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले तपाईंका विचारलाई समर्थन गर्नेछन् । यो साताका लागि शुभअङ्क ५,६ र शुभरङ्ग सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ हुनेछ ।
यो साता वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ । व्यवसायका लागि यात्राको सम्भावना पनि छ । मनोरञ्जनमा सहभागी भइएला । साताको उत्तरार्ध बाट घर व्यवहारको समस्याले सताउनेछ । व्यापार व्यवसायमा बाधा आउनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ६,७ र शुभरङ्ग कलेजी वा खैरो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि भैरवजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो हप्ता रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् । धार्मिक यात्राको योगछ । परीक्षा आदि प्रतिस्पर्धामा उर्तिण हुनसकिनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्त्व जमाउन सकिनेछ । बुधबारबाट प्रेममा बाधाका साथै बन्न लागेको काम विग्रनेछ । शैक्षिक क्षेत्र कमजोर रहनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,९ र शुभरङ्ग सुन्तला हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि देवीजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो साता रमाइलो यात्राको योग रहेको छ । दैनिक कार्यमा प्रगति हुँदै जानेछ । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । धार्मिक तथा समाज सेवामा मन लाग्नेछ । मध्य सातामा लत्ता कपडामा बढी धन खर्च हुनेछ । मनमा निरासा र शरीरमा आलस्य आउला । यो साताका लागि शुभअङ्क २,५ र शुभरङ्ग पहेँलो वा गुलाबी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महासरस्वतीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
यो साता आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्श गर्नु पर्ला । आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । आज आर्थिक कारोवारमा मन्दी आउनेछ । मंगलवार बाट अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,८ र शुभरङ्ग । निलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो साता छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा रहला । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ । अतिथिको रूपमा सत्कार पाइएला । महिला वर्गबाट विषेश सहयोग मिल्नेछ । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो सफलतापनि मिल्ला । यो साताका लागि शुभअङ्क २,८ र शुभरङ्ग सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि हनुमानजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
रमाइलो यात्राको योग रहेको छ । काम गर्ने उत्साह र हौसला मिल्नेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बेलाछ । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ । शुभकार्यको चर्चापनि चल्नेछ । साताको मध्यमा नियम र अनुशासनलाई बेवास्ता गर्दा अवसर र लाभ गुम्न सक्छ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,६ र शुभरङ्ग वैजनी वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व महादेवको आरधना गरी कार्य आरम्भ गर्दा सफलता मिल्नेछ ।
यो हप्ता आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ । चिताएको कामले तीव्रता लिनसक्छ । नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योगपनि छ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,६ र शुभरङ्ग घ्यूङ्ग वा गुलाबी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि भैरवजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो साता अनावश्यक झमेलामा परिएला । बन्न लागेको काम विग्रीएला । नाक तथा घाँटीमा समस्या आउनेछ । चोटपटकको भयछ सचेत रहनुहोला । मध्य साताबाट सुन्दर पहिरनले ब्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछ । आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,३ र शुभरङ्ग पहेँलो वा हल्का रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विष्णु भगवानको दर्शनगरी आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
यो साता अध्ययनमा रुचि जाग्नुका साथै यात्राका योग पनि देखिन्छन् । आदर्श ब्यक्ति सँगको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् । वाहन सुखपनि मिल्नसक्छ । साताको मध्य भागमा आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । घरायसी झमेलामा परिनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,५ र शुभ रङ्ग रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विष्णुजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले सफलता मिल्नेछ ।
यो सातामा नजिकको व्यक्तिबाट धोका पाईन सक्छ र मन खिन्न हुने स्थिति आउनसक्छ । वैदेशिक क्षेत्रपनि कमजोर नै रहला । बुधवारबाट विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । नयाँ नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ यो साताका लागि शुभअङ्क ३,४ र शुभ रङ्ग सेतो वा पहेंलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि शिवजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
(अधिक जानकारीका लागि )
रौतहटका पुजारीको ह’त्या कारण यस्तो
भदौ १७ काठमाडौं, रौतहट माधवनारायण नगरपालिका-२ खेसरहियाका पुजारी श्रीराम साहको आर्थिक लेनदेनका कारण ह’त्या भएको खुलेको छ। केही दिनअघि प’क्राउ परेका देवानी गोनाही नगरपालिका-१ करुनियाका रामनरेश पटेल र बालकुमार पटेलको बयानका आधारमा प्रहरी यो निष्कर्षमा पुगेको हो। प्रहरीले यी दुई व्यक्ति प’क्राउ परेको सूचना गोप्य राखेको थियो। भदौ ३ गते ६२ वर्षीय साहको क’ञ्चटमा गो’ली […]
यस्तो छ तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान, कहाँ के हुन्छ ?
Posted on September 13, 2020 Author Rapti Khabar
भदौ २८, काठमाडौं । तीन दिन देशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हाल मनसुनको न्युन चापीय रेखा नेपालभन्दा दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश १, बागमती प्रदेश, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का केही स्थानहरुमा मेघ […]
आज २०७७ असोज ६ गते मंगलबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? हेर्नुस
Posted on September 21, 2020 Author Rapti Khabar
मेष कल्पना र भावनामा केन्दित भइने छ । बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ, मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला । चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि बुद्धि–विवेकले काम गर्न सकिनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि आत्मविश्वास, मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्‍याउनेछ। समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूको समेत साथ प्राप्त हुनेछ। काम पूर्ण नभए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ अवश्यै हुनेछ। बृष […]
आज २०७७ असोज ४ गते आइतबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस
५ गतेदेखि हुने हवाई उडानको टिकट कति भयो बुकिङ ? हेर्नुस